May 31, 2018 | English, NEWS |0|
THE HAGUE (Reuters) – Hundreds of Rohingya victims have appealed to judges at the International Criminal Court to grant prosecutors jurisdiction to investigate deportations from Myanmar to neighbouring Bangladesh, an ICC official said on Thursday. The world’s first permanent war crimes court does not have automatic jurisdiction in Myanmar because it is notamember state, but the prosecutor in April asked the court to look into the Rohingya crisis andapossible prosecution through Bangladesh, which isamember. Since August, nearly 700,000 Rohingya Muslims have fledamilitary crackdown in mainly Buddhist Myanmar, the United Nations and...
May 30, 2018 | Myanmar, NEWS |0|
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ တိုးတက်မှုမမြင်ရသေးဘူးလို့ အမေရိကန်အစိုးရက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ လူနည်းစုဘာသာကိုးကွယ်သူတွေကို လူမျိုးစုလိုက် ရှင်းလင်းဖယ်ရှားမှုတွေ ခုချိန်ထိရှိနေတယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်းနဲ့ အခုဆိုရင် ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာ နှိမ်နှင်းမှုတွေကို ၂ ဆတိုးလုပ်နေတယ်လို့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် သံအမတ်ကြီး Sam Brownback ကပြောကြားပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် နိုင်ငံတကာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်စဉ်မှာ ရိုဟင်ဂျာတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်း မီးမောင်းထိုးပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မစုမြတ်မွန်က ဆက်ပြီးတင်ပြပါမယ်။ ကမ္ဘာတဝန်းက နိုင်ငံနဲ့ နယ်နမိတ်ပေါင်း ၂၀၀ က ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတွေကို တင်ပြထားတဲ့ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် နိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကို မေလ ၂၉ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ လူတိုင်းရဲ့ အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်တခုဖြစ်တဲ့ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုမြှင့်တင်ဖို့ အမေရိကန်အစိုးရက သန္နိဋ္ဌာန်ချဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mike Pompeo က အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် သံအမတ်ကြီး Sam Brownback ကလည်း နိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကို အမေရိကန်မှာ ပြဌာန်းခဲ့တာ အနှစ် ၂၀ ရှိသွားချိန်မှာ တိုးတက်မှုတွေရှိလာခဲ့သလို မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ဆောင်ရွက်စရာတွေအများကြီးလိုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေလည်း ရှိနေသေးတယ်လို့ အင်္ဂါနေ့က ခုလို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ အခြေအနနဲ့ အခု မြန်မာနိုင်ငံက ကချင်ပြည်နယ်အခြေအနေအပါအဝင် ပိုပြီးစိတ်ပျက်စရာအဖြစ်အပျက်တချို့ တကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိနေတာကို ဝန်ကြီး Pompeo ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လလောက်က Bangladesh နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတချို့ဆီကို ကျွန်တော်သွားခဲ့ပါတယ်။...
May 30, 2018 | English, NEWS |0|
The situation is dire, says Ambassador-at-Large for International Religious Freedom Sam Brownback The United States has asked for more action from the international community regarding the Rohingya issue and other areas of concern in Myanmar in the coming days, terming the situation “dire.” “Former secretary Tillerson had announced that evidence of ethnic cleansing had been found, and I also believe it is ethnic cleansing ofareligious minority that is taking place,” said Ambassador-at-Large for International Religious Freedom, Sam Brownback. The US envoy for international religious freedom made the remark ataspecial briefing on the release of the...
May 26, 2018 | Myanmar, NEWS |0|
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မောင်တောဒေသမှာ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခံရမှုအပေါ် AI နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့ကြီးရဲ့ အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်လို့ သူတို့ သတ်ဖြတ်ခဲ့တာမဟုတ်ကြောင်း ARSA ရိုဟင်ဂျာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့က ပြန်လည်ငြင်းဆိုတဲ့ ကြေညာချက်ကို မနေ့ သောကြာနေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ AI ကတော့ သူတို့ရဲ့အစီရင်ခံစာအပေါ် အခိုင်အမာ ရပ်တည်ပြီး ARSA ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ဟာ မြန်မာစစ်တပ်က တုံ့ပြန်တဲ့ပုံစံအတိုင်း ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ စုံစမ်းမေးမြန်းထားတဲ့ မအင်ကြင်းနိုင်က အပြည့်အစုံ တင်ပြပေးထားပါတယ်။ AI လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကြီးကတော့ သူတို့ရဲ့ အစီရင်ခံစာအပေါ် အခိုင်အမာရပ်တည်ကြောင်းနဲ့ ARSA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့ အခုလို ငြင်းဆို တုံ့ပြန်ချက်ဟာ မြန်မာစစ်တပ်လိုပဲ တဖက်သတ်ငြင်းဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်နေကြောင်း AI အစီရင်ခံစာကို ပြုစုရေးသားခဲ့သူတဦးဖြစ်တဲ့ Matthew Wells က ဗွီအိုအေကိုပြောပါတယ်။ “ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ ဟိန္ဒူ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေ သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီကနေ့ ARSA ရဲ့ ငြင်းဆိုချက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်ကစပြီး နောက်ပိုင်း ရိုဟင်ဂျာတွေကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခံရမှုကို မြန်မာ စစ်တပ်က ငြင်းဆိုသလိုမျိုး ပုံစံတူနေတာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ အခုချိန်မှာ လိုအပ်နေတာက ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ နှစ်ဘက်စလုံး ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုတွေအတွက် တာဝန်ရှိသူအားလုံးကို တရားစီရင်ပြီး အပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ဖို့ လွတ်လပ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ နိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ သွားရောက် စုံစမ်းခွင့်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။” ဒါပေမယ့် မေလ ၂၅ ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ ARSA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် Ata Ullah...
May 25, 2018 | English, NEWS |0|
Washington, D.C. – House Foreign Affairs Committee Chairman Ed Royce (R-CA) issued the following statement on House passage of H.R. 5515, the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019: “In an increasingly dangerous world, it is critical that our troops have the support they need to keep America safe. This bill includes vital funding for military training and much-needed equipment, and I was pleased to joinastrong bipartisan majority in passing it through the House. “The NDAA also addresses other urgent priorities, including ethnic cleansing in Burma. This provision imposes new sanctions on Burmese military officials and bars...